Shirkadda Apple oo soo saaraysa taleefoonkii ugu casrisanaa ebed - BBC News Somali
Shirkadda Apple oo soo saaraysa taleefoonkii ugu casrisanaa ebed
Inkasta oo isbadalo badan lagu sameeyay taxanaha taleefoonada Apple ee IPhone loo yaqaano, ayaa haddana isbadalka hadda lagu samaynayo uu yahay kii ugu weynaa inta la xusuusanyahay taariikhda ama xitaa maskaxda bini'aadamka ay sawiran karto in ay suurtogal tahay.
Xigashada Sawirka, APPLE
Ninkii horay maareeyaha uga ahaa shirkadda Scott Forstall ayaa waxa uu xusuustaa in uu hindisan kala sheekaystay asaasaha shirkadda Steve Jobs qadada dusheeda. "Labadeenaba waxaan isticmaalaynay taleefoonadeena, balse aad ayaan u necbeyn, sababtoo ah ma jirin wax xiiso galinaya qofka oo ku jira halkaas" ayuu yiri.
"Agagaarkeena ayaan eegnay, qofkasta oo taleefoon haysta waxa uu u ekaa in uu xanaaqsanyahay marka uu isticmaalayaan taleefonka, Steve ayaa kadib igu yiri ma kula tahay in aan waxa aan kumbutuuraadka ku samaynay oo kale aan taleefoonada ku samayn karno" ayuu intaas ku daray.
Xigashada Sawirka, ERICA SADUN
Xigashada Sawirka, HTC
Charles Arthur oo ah qoraaga buugga Digital Wars ayaa yiri "U fiirso meel kasta oo ay dadka isugu imaadaan, waxaad arkaysaa in dadka ay sawir fool-ka-fool ah la galayaan shaqsiyaadka caanka ah ee halkaas kasoo qaybgala".
Geeridiisa waxa ay ahayd mid si weyn adduunyada u gilgishay, waxaana la'isla qiray in uu adduunka iyo shirkadaba ka baxay qof ay adagtahay in qof kale uu badalo.
Maareeyihii Microsoft Steve Mallmer ayaa ku maadsaday Apple iyo taleefoonka cusub ee ay soo saartay, waxaana laga soo xigtay isaga oo leh "Waa taleefoonkii ugu qaalisanaa, macaamiishana ma iibsan doonaan".
Ninkan ayaa waxa uu iibsaday taleefoonka Nokia, balse waa lagu qasaaray, go'aanadiisa xuna waxa ay horseedeen in uu isaga tago xilka.
Google oo bilawday video app oo lagu hadlo - Duo
Gabadhii ka badbaadday markabkii Titatic iyo 2 musiibo oo kale
Muxuu ku taajiray ninkii alwaaxa ku seexanayay?
Maxay tahay sababta dadka reer Hindiya ay u sii cayilayaan?
Xassan Sheekh iyo maamul goboleedyadii xiriirka dhaw la lahaa Farmaajo